SCCM Inverview Mibvunzo nemhinduro dzakabvunzwa mu 2018 »ITS Tech School
Mibvunzo yeCSCCM yakabvunzwa muInverview muna 2018
Kubva kuScCM Certifcation
SCCM Inobvunzurudza Mibvunzo Nemhinduro
Tsanangurai Mutemo Wemazuva Ekupedzisira
Tsanangurai Nguva Yakatadza Kuunganidza
Ko nhengo dzaizokwanisa kuve dzakasiyana-siyana dzekuunganidza dzinosanganiswa kana dzisingabatanidzwi muChitsva?
Ndeipi Windows Server Update Service kana WSUS inoshandiswa?
Will CM (Kugadziridza Mutungamiri) 2007 Inopa Kugovera Isofisi kuMutauro wayo?
Ko Computer Computer Manager Console inogona kuitika pamberi peMuteereri akaiswa?
Ko yose Collections inowana Incremental Updates?
Unoshandisa izwi rokuti All Unknown Computer Collection?
Nhamba ipi yeDhift Management yeWebhuti inogona kuva?
Zita Marudzi Akasiyana-siyana ezvinzvimbo zvinowanikwa muCCCM 2007.
Ndingakwanisa here kushandisa SSC Framework yekugadzira zvigadziri zvinowanikwa se Linux kana seMac Computer Network nezvimwe zvakadaro?
Yakaparadzanisa pakati pemunharaunda uye Mixed Mode?
Unofananidzwa neIndaneti yeMetrail Metering?
As SCCM is standout pakati pezvinonyanya kushandiswa zvinoshandiswa pakushandura maPC uye mitambo, i SCCM certification vabatsiri vari kutsvaga uye vanobudirira nekutengeswa nemasangano maviri ebhizimisi uye asingabatsiri. MuUnited States maneja wekugadzirisa anowana mubhadharo we US ​​$ 82,000 pagore. Maoko eCCCM-pakugadzirira (kuti mumakwikwi anowanikwa pavanenge vachitsvaga chiziviso) vanopoteredza kupa tariro tariro yakatarwa nekuongorora vatengi nevashumiri mashumiri uye idzi nyanzvi dzinokwanisawo kutumira, kutarisira, uye kugadzirisa zvigadzirwa nemaseva. Nyanzvi dzeSCCM dzinowedzera kudiwa kuti dzigadzirise hurongwa uye zvirongwa uye dzinoita kuti zviite zvakakwana zvigadziriro. Chikamu chavo ndechikonzero chinokonzerwa nekusimudzira unyanzvi hwekushanda uye nekuchengeta kuchengetedzwa kwemaitiro. Heano mibvunzo mashomanana iwe iwe seSCCM chiyeuchidzo chinogona kutarisana apo iwe unoratidzira kumusangano wepositi yekugadzirisa Meneja.
Shandisi yeSMS inogonawo kunzi seWMI kana Windows Management Instrumentation mupiro. Iyo inoshandiswa neComputer Manager kana CM console yeScCM software uye inopa "kuverengera" uye mune "kutaura" kuwanikwa kune database yehurongwa hwekugadzirisa-shandisi nzvimbo.
Iko 64-bit Operating System Inogona Kuita Mutset Manager Console
Zvechokwadi. Kunyange zvazvo CM console yeScCM iri chirongwa che 32-bit, inogona kuwedzera kuenderera mberi pane 62-bit Window kugadziriswa.
Zvose zvinounganidza ndezvikamu zvekunamatira kwavo. Pose pane imwe nguva kuunganidzwa kunoitwa kuti muumbi anofanira kuratidza kuti iri kurega kuunganidza.
Zvechokwadi, iye zvino zvinofanira kunge zvichibvira. Iyo itsva 2012 CM (Configuration Manager) ine hurongwa hutsva hwemitemo yeizvi. Aya ndiwo "incorporate" uye "bar" mitemo yekuunganidza. Idzi nheyo dzinobata kufunga nekudziviswa kwekuunganidza zvinotora chikamu pane imwe nzvimbo.
IWSUS inobatsira kuti vatungamiri vabvise uye vatume zvinhu zvose zvakanyanya kuitika zvinozorodza kubva kuMicrosoft kusvika kuPc inoramba ichimhanya paWindows working framework.
Mutungamiri wekugadzirisa haagoni kukwanisa chero sarudzo ipi neyokutaridzika.
Muchiitiko apo nzira yekuzivisa iripo, iyo console inogona kuonekwa. Asi, hukuru hwahwo hunosanganisira software kuparadzaniswa, kushamba, uye kutungamira kwepurogiramu dzinozorodza pakati pevamwe zvinongowanikwa pachena apo vatengi zvikamu zvakanyatsobudiswa.
Aiwa, rimwe boka rekuunganidza iro rinoshandiswa mubvunzo rinoshandiswa pakugadzirisa haisi kusimbiswa nekuwedzera kwekuvandudzwa.
Iyi kuunganidza ine nyaya mbiri, iyo inoita kuti muteresi ataure maitiro ekushanda kuPC, izvo zvisiri kutarisirwa nemutungamiriri wekugadzirisa. Maitiro ekushanda ari nenzira iyi yakajeka ku CM. Aya maPC anosanganisira izvo zvisati zvawanikwa ne CM; kwete kutumirwa kupinda CM; kana, maPC ayo CM asina kuiswa.
Kunyange zvazvo muchengeti anogona kugadzira hutungamiri hwakasiyana-siyana hunotarisa mukati mewebsite, imwe chete yei inogona kunge iri iyo inoshandiswa pakuronga uye inogona kurongeka seyoyo. Nzira yekuve nehuwandu hwekutarisira kusakanganiswa inotarisa ndeyokuti muchengeti anoronga hutungamiri hwakasiyana-siyana hunotarisana neNLB kana Network Load Balancing cluster. Saka anogona kukonzera iyi cluster yeNLB kuti ive yakasarudzwa. pfungwa.
Essential Site: iyi yepaiti ndeyekutarisira vatengi vemakambani ane masangano makuru.
Optional Site: iyi shanduro ndeyekutonga kupararira kwezvinhu kuti mutengi agadzire iyo iri munzvimbo iri kure. Kubatanidza kwemasvomaneti aya kwakadzivirira simba rekutengesa.
Mubereki Website: iyi shanduro iri panzvimbo yakakwirira yefambiro inoenderera mberi.
Tyke Site: nzvimbo iyo inowira pasi pechivakwa chakavakwa mukati megadziro uye inowana mamwe mashoko kubva panzvimbo ino inozivikanwa se tyke site.
Iyo meneja wekugadzirisa anochengeta zvakasiyana uye imwe ID kwazvimwe zvose zvakasiyana-siyana zvemagetsi zvinogona kusanganisira Mac PCs kuronga, Windows PC nePC kuronga, Linux PC nezvimwe zvakadaro. Mutevedzeri anogona kuita imwe yekuunganidza iyo ine mubvunzo wakatarwa unotonga, izvo zvichabvumidza kudzoka kwezvakadaro izvo zvigadzirwa zvine ID chaiyo.
Nzira yemhando inzira yakachengetedzwa uye inogadzirisa zviri nani kuvharidzira uye kuongorora apo uchishandisa chengetedzo dzekuchengetedzwa kwemashoko ekuisa mazita mukati. Inogonawo kusanganisira pamwe nePKI uyezve kuwedzera hutungamiri hwekutenga vatengi muInternet.
Iyo Mixed mode haitendi sangano rePKI uye saka haina chero rudzi rwekuvimba kwekunze. Icho chinopindirana nevatengi vanoshandisa fomu SMS 2003.
Kuyera kwepurogiramu kunobatsira kucherechedza uye kuunganidza kwezvinhu zvose zvinoratidzwa nekushandiswa kwe software pane vatengi vakasiyana ve CM kana Configuration Manager.
Iwe unogona kutsvaga SCCM certification uye kugadzirira pawebhu. Kutyaira pane webhutungamiri hutungamiri kukupa maoko-kugadzirira anozivikanwa nekushandiswa nekushandiswa kweSCCM software chaizvoizvo. Mudzidzisi akadzingisa makirasi uye kugadzirira, pawebhu uye akadzivisa kero dzekirasi, mapepa emapepa ega, mapepa edzidzo uye marudzi akasiyana-siyana anoita kuti iwe ugadzirire zviri nani kuongororwa uye mhepo kuburikidza necho kunze kwechitsva.